Air Greenland na-etinye iwu Krismas maka Airbus A330neo
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Air Greenland na-etinye iwu Krismas maka Airbus A330neo
Airlines • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • investments • News • Tourism • Transportation • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Air Greenland, ọkọlọtọ-ụgbọelu maka Greenland, bụ ọdụ ụgbọ elu kachasị ọhụrụ iji nye ụgbọ elu Airbus 'ọgbọ na-esote A330neo widebody ụgbọelu.
Ihe ọhụrụ A330-800 ga-anọchi ụgbọ elu ụgbọelu Airbus A330-200ceo merela agadi iji nweta arụmọrụ na-ejikọ agwaetiti Arctic na Denmark site na njedebe nke 2022 gaa na gafere.
Onye isi oche Air Greenland bụ Jacob Nitter Sørensen kwuru, sị: “A330neo bụ akụkụ dị mkpa nke atụmatụ ụgbọ mmiri nke Green Greenland. Aircraftgbọ elu ọhụrụ a, maka ọtụtụ afọ na-abịanụ, ga-enye ndị njem njem na site na Greenland ahụ ọhụụ ọhụụ pụrụ iche mgbe ị na-ahapụ akara ụkwụ carbon kachasị dị ala. The A330neo bụ nke zuru oke kwesịrị ekwesị maka ọrụ siri ike nke ịnye ndị njem, njem na ibu na ọrụ niile na nchekwa na nke Greenland.
Christian Scherer, Airbus Chief Commercial Officer kwuru na “Obi dị anyị ụtọ ịhụ ka Air Greenland megharịrị ntụkwasị obi n’ebe A330 Family nọ ma sonyere ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị ọrụ na-ahọpụta A330neo ka mgbanwee ezi uche dị na ha maka ụgbọ mmiri ha merela agadi. “Iji were ụgbọelu ụgbọelu ahụ dị iche nke na-acha uhie uhie megide Arctic gburugburu na-enye ụfọdụ obi ụtọ ekeresimesi na njedebe nke otu afọ nke siri ike maka ụlọ ọrụ anyị niile.
The Airbus A330neo bụ ezi ọgbọ ọhụụ ọhụụ, na-ewu ụlọ maka atụmatụ ndị ewu ewu maka A330ceo ma mepụtara maka teknụzụ kachasị ọhụrụ A350. Ejiri ụlọ Airspace na-adọrọ adọrọ, A330neo na-enye ahụmịhe ndị njem pụrụ iche na ọgbọ ọhụụ, usoro ntụrụndụ na njem na njikọta. Kwadoro site na igwe ugbua nke Rolls-Royce Trent 7000, ma gosiputara ohuru ohuru na ubara na A350 sitere n'ike mmụọ nsọ 'Sharklets', A330neo na-enyekwa ọkwa arụmọrụ a na-enwetụbeghị ụdị ya - ya na 25% obere mmanụ ọkụ na oche ọ bụla karịa ọgbọ mbụ ndị asọmpi. Site na ike a haziri nke ọma na ụdị ọmarịcha ụzọ ya, A330neo bụ ezigbo ụgbọ elu iji kwado ndị ọrụ na mgbake post-COVID-19.
Ndị ọrụ gọọmentị na-ahụ maka njem nlegharị anya gara Jamaica maka ọkwa dị elu ...
Enweghị booze na Egwuregwu: Tokyo Olympics na-enweghị mmanya
American ụgbọ elu tụnyere Jet Blue: Onye isi ...